Beit Bridge to Bulawayo, Zimbabwe.
After crossing the border from South Africa to Zimbabwe at Beit Bridge the carriages of the “Union Limited Zambezi” train were handed over to the National Railways of Zimbabwe. A diesel locomotive hauled the train overnight to Heany Junction, just to the east of Bulawayo, where a Garratt steam locomotive was waiting to take the train on to Bulawayo first thing in the morning of 29/7/1992.
At this date there was still considerable steam-hauled freight in Zimbabwe, shunting around Bulawayo, and museum steam locomotives could be hired to pull trains.
While the tour train was being re-provisioned in Bulawayo station there was the opportunity to watch and photograph the Garratts shunting nearby.
1-of-10) National Railways of Zimbabwe class DE3 1-Co-Co-1 diesel locomotive no. 1305 (built by English Electric in 1962/3) shunting freight wagons at Beit Bridge, Zimbabwe, 28th July 1992.
2-of-10) National Railways of Zimbabwe class DE3 1-Co-Co-1 diesel locomotive no. 1305 (built by English Electric in 1962/3) shunting freight wagons at Beit Bridge, Zimbabwe, 28th July 1992.
3-of-10) National Railways of Zimbabwe class DE3 1-Co-Co-1 diesel locomotive no. 1305 (built by English Electric in 1962/3) shunting freight wagons at Beit Bridge, Zimbabwe, 28th July 1992.
4-of-10) National Railways of Zimbabwe 15A class 4-6-4+4-6-4 'Garratt' no. 407 'Ukhozi' (built by Beyer Peacock in 1950) at Heany Junction, Zimbabwe, with the carriages of the 'Union Limited Zambezi' train ready to take the train on to Bulawayo, in the early morning of 29th July 1992.
5-of-10) National Railways of Zimbabwe 15A class 4-6-4+4-6-4 'Garratt' steam locomotive no. 410 'Inkolomi' (built by Beyer Peacock in 1950) passes Heany Junction, Zimbabwe, with a coal train, 29th July 1992.
6-of-10) National Railways of Zimbabwe 15A class 4-6-4+4-6-4 'Garratt' no. 407 'Ukhozi' (built by Beyer Peacock in 1950) has just arrived in Bulawayo station, Zimbabwe, with the 'Union Limited Zambezi' train, 29th July 1992. The train took on extra provisions here, including Zimbabwean beer and wine.
7-of-10) National Railways of Zimbabwe 14A class 2-6-2+2-6-2 'Garratt' steam locomotives nos. 520 & 511 (built by Beyer Peacock in 1953) on shunting duties at Bulawayo, Zimbabwe, 29th July 1992.
8-of-10) National Railways of Zimbabwe 14A class 2-6-2+2-6-2 'Garratt' steam locomotive no. 516 (built by Beyer Peacock in 1953) on shunting duties at Bulawayo, Zimbabwe, 29th July 1992.
9-of-10) National Railways of Zimbabwe 14A class 2-6-2+2-6-2 'Garratt' steam locomotive no. 520 (built by Beyer Peacock in 1953) takes on water while on shunting duties at Bulawayo, Zimbabwe, 29th July 1992.
10-of-10) National Railways of Zimbabwe 14A class 2-6-2+2-6-2 'Garratt' steam locomotive no. 512 (built by Beyer Peacock in 1953) on shunting duties at Bulawayo, Zimbabwe, 29th July 1992.